Madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa shir kaga wada qeybgalaya Brassels - BBC News Somali
Madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa shir kaga wada qeybgalaya Brassels
16 Luulyo 2018
Image caption Shirka Brassels
Waxaa hadda si toos ah u furmay shirkii Golaha Iskaashiga Soomaalida ee Brussels, kaas oo looga hadlayo sidii gacan loo siin lahaa Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Cawad oo BBC-da la hadlay mar sii horeysay ayaa sheegay in shirka uu yahay mid lagu qiimeynayo horumarka dhinacyada kala duwan laga gaaray gudaha Soomaaliya.
Liis ay aragtay BBC-da oo ah dadka ka qeybgalaya ayaa waxa uu muujinayaa dad ka badan 70 qof oo xilal kala duwan ka haya Soomaaliya, ayna ka midyihiin dad ka socda hay'addaha gargaarka, iyo waliba ururada bulshada rayidka ah.
Posted by BBC News Somali on Monday, 16 July 2018
Balse arrimaha xoogga la saarayo waxaa ka mid ah arrimaha amniga, hanaanka siyaasadda iyo doorashooyinka, iyo waliba dhaqaalaha.
Waxaa madasha jooga dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, kuwaas oo hadal ku leh shirka sida ka muuqata jadwalka shirka oo ay BBC-du aragtay.
Image caption Madaxda Soomaalida iyo beesha caalamka ayaa ka wada qeybgalaya shirka
Madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa la safray waftiga madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka madaxda kale ee gobolada ay siyaabo kala duwan oo iskood ah shirka ugu safrene.
Sida uu kusoo waramayo wariyaha BBC-da oo xarunta shirka ku sugan Moowliid Xaaji, waxaa shirka aad u jooga xubnaha beesha caalamka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ayaa xiri doona, isaga iyo la-guddoomiyeyaasha.